Changing Your Vocal ~ .
IDevice Firmwares ဒေါင်းရန်
iPhone မှာ မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်း
ADOBE PHOTOSHOP CS4 အသုံးပြုနည်း
DOS COMMANDS နှင့်လက်တွေ့အသုံးများ
A+ ၏ နောက်ကွယ်
LINUX OS အကြောင်းနှင့် အသုံးပြုပုံ
IPHONE JAILBREAK လုပ်နည်း
WINDOW VISTA တင်နည်း မြန်မာစာအုပ်
WINDOW XP တင်နည်းမြန်မာစာအုပ်
Changing Your Vocal
ကိုယ် ပြောလိုက်တဲ့ အသံကို ပြောင်းပေးဖို့လေဗျာ။ မိန်းကလေးအသံ၊ ကလေးအသံ၊ ယောကျာင်္းလေးအသံ၊ သရဲအသံ၊ ခွေးအသံ၊ (သို့မဟုတ်) မိမိလိုချင်တဲ့အသံတွေကို စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်။ နောက်ခံအသံတွေ အနေနဲ့လည်း မြို့ထဲက ကားဟွန်းသံတွေလိုမျိုး ကြိုက်သလိုထည့်လို့ရတယ်။ ဘယ်လိုသုံးမလဲ ဆိုတော့ …နောက်ခံကားသံတွေထည့်ပြီး ‘ချစ်ရေ .. ကိုယ် မြို့ထဲရောက်နေလို့ကွာ’ ပေါ့ ။
ဒေါင်းနိုင်တဲ့ နေရာကတော့ mediafire တစ်နေရာပဲ ပေးထားလိုက်တော့မယ်ဗျာ။ အဆင်ပြေသလိုသာ ကြိုးစားပေတော့။ katz.cd မှာဆိုရင်လည်း အခြားသော hosting မျိုးစုံက တင်ပေးထားပါတယ်။ ကွင်းနဲ့ရေးပေးထားတဲ့ နာမည်ကိုသာ search ထဲ ထည့်ရှာလိုက်။ ပေါမှပေါပဲ။
ဒီကောင့်ထဲမှာ crack ကို folder နဲ့ ထည့်ပေးထားတယ်။ replace ပေးရမယ့် crack ပါဗျာ။ install လုပ်ပြီး ဖွင့်ကြည့်ဗျာ။ ပထမဆုံး profile တစ်ခု ဆောက်ခိုင်းလိမ့်မယ်။ နာမည်လေးထည့်ပြီး next တွေနှိပ် စပေးလိုက်။ ပြီးရင် သုံးချင်တဲ့ အသံကို ရွေးပေးလို့ရသလို adjust လုပ်ပြီး ပြင်လို့လည်းရတယ်။ ဒီအသံကို gtalk ကဲ့သို့သော im တွေမှာလည်း ဖြစ်ဖို့ကိုတော့ Settings ရဲ့ Default system Microphone ဆိုတာကို check ပေးလိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ Vista နဲ့ windows7မှာဆိုရင်တော့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ mic ကို အမှတ်ခြစ် (default) ပေးထားပြီး၊ Bee audio ဆိုတဲ့ mic ကလည်း စကားပြောလိုက်ရင် အတုံးလေးတွေ လိုက်တက်ရမယ်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်မှာပဲ သုံးသုံး ကိုယ်ပြင်ထားတဲ့အသံ ထွက်ပြီပဲ။ အောက်ကပုံတွေကို ကြည့်လိုက်ပါ။
Download MorphVOX_Pro_4.3.3 Download >>
စာရေးသူ - ကြေးစားလေး at 12:39 PM
Labels: Vocal Application
PDF File အနေနဲ့ ပြောင်းချင်လျှင်
email လိပ်စာထည့်ပြီးလျှင် Submit ကို နှိပ်ပါ
Like လုပ်ပြီး Facebook မှာ ဖတ်မယ်
Easy and Useful (4)
Flash Application (2)
Joomla Ebook (1)
Tips and Knowledge (3)
Vocal Application (1)
Window7File Copy (1)
Window Themes (2)
သာလွန် OS (1)
Joomla Website ရေးနည်း မြန်မာလိုစာအုပ်လေးပါ..။
အခုတင်ပေးမှာကတော့ ကိုယ်ပိုင် Website တစ်ခုကိုလွယ်ကူစွာနဲ့ ရေးနိုင်အောင်လို့ ကိုမိုးမြင့်ရှိန် ရေးထားတဲ့ Joomla website ရေးနည်း Ebook လေးပါ.....
မြန်မာနာမည် Virus များ ၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ရှင်းလင်းရန် Software လေးများ.
ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကိုလည်း အထင်သေးလို့မရတော့ဘူးဗျ.။ အိုင်တီနည်းပညာတွေကို အမှီလိုက်နိုင်လာ ရုံမက တချို့က အများကောင်းကျိုးအတွက် အသုံးချတာရှ...
Android Phone တွေမှာ မြန်မာဖောင့်နှင့် ကီးဘုတ် သွင်းခြင်း
အခုကနြျောတငျပေးမယျ့ post ကတော့ Android Phone တှမှော မွနျမာ ဖောငျ့ ထညျ့နညျးလေးနဲ့မွနျမာ ကီးဘုတျထညျ့တဲ့နညျးလေးပါ..။ ပထမဆုံး Android Phone တှမေ...
ဓါတ်ပုံ ကို ပန်းချီ အဖြစ်ပြောင်းခြင်း
ကျနော် ဆိုဒ်ဘက်ကို မလှည့်တာ ၁ နှစ် လောက်ရှိပြီ ဗျာ.။ အခု နည်းနည်း အချိန်လေး ရတုန်း လေး post လေး တစ်ခု တင်လိုက်ဦးမယ်စဉ်းစားတာ အခု အလွယ်ဆုံး ...
Babylon+Oxford English To Myanmar Dictionary ကို အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနေသူများအတွက် အသုံးဝင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တင်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဒီ Software...
မြန်မာလက်ကွက် မကျွမ်းကျင်သေးသောသူများအတွက်ပါ။ ဒါပေ့မယ့် ဒီလိုဆော့ဝဲလေးတွေကို အင်တာနက် မသုံးတဲ့သူ တွေ အတွက်ပိုကောင်း တယ်လို့ထင်တယ်။ ကွန်ပျ...
ကျွန်တော့် ၀ဘ်ဆိုက်မှာ တင်မဟုတ်ပါဘူး. တစ်ခြား ဆိုက်တွေမှာ ရှိတာတွေကို ဘယ်လို ရှာလို့ရသလဲ google ကနေ ဘယ်လို ရှာရမလဲ ဆိုတာကို ဒီနေ့ည ပြောပြပ...
iTunes Error 3194 ဖြေရှင်းရန်
iPhone 3Gs ကစပြီး Apple ရဲ့Device တွေကို Stock (သို့ ) Custom firmware တွေကို Restore လုပ်ရာတွင် Apple က SHSH Blobs (Signature HaS...
Gmail, Galk အတွက် Proxy တွေပါ..။
အရှေ့ က xxx.xx.xxx.xx ဆိုတာတွေက Gtalk မှာဆိုရင် Settings >> Connection မှ User Following Proxy ဆိုတာကို အစက်လေးပေးလိုက်ပါပြီးရင် Host...
အခုကျနော်တင်ပေးမှာကတော့ Password ခိုးတာလို့ လဲပြောလို့ ရသလို မေ့သွားတဲ့ Password ကို Recovery ပြန်လုပ်တယ်လို့ လဲပြောလို့ ရပါတယ်...။ ကျနော်လဲ...
Copyright © 2012 | Created by ကြေးစားလေး